Hormuud News Wednesday, May 23rd, 2018 | 01:26
[Tuesday, August 8th, 17] :: Doorashada Kenya oo socota
Nairobi (RH) Dadka reer Kenya oo maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne iyo baarlamaan cusub.
Dorashadan ayaa daba socotay toddobaadyo ay socdeyn ololayaal.
Goobaha doorashada ayaa furmay 6-dii subaxnimo iyadoo ay soo xirmi doonto 5:00pm wakhtiga dalka Kenya, natiijada doorashada guud ayaa soo bixi doonta muddo toddobaad gudaheed.
In ka badan 19, milyan oo qof ayaa isku diiwaangaliyey doorashada maanta ka dhaceysa Kenya, waxaana goobaha doorashada la sheegay in ay gaarayaan 40,883 guud ahaan dalka.
Goobaha codbixinta ayaa saaka la arkayey dadweyne farabadan oo safaf dhaadheer ugu jira kuwaasoo codadkooda dhiibanaya.Goobaha codbixinta ayaa mashquul sii ahaanaya illaa iyo 1-da duhurnimo ee maanta wixii ka dambeeya waa laga yaabaa in ay sii yaraadaan.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta, oo ah 55 ayaa raadinaya mar labaad in la soo doorto oo wakhtigiisa ugu dambeeya sii joogaya.
Kenyatta ayaa loolan adag kala kulmaya hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo 72 sanno jir, isagoo u tartamaya markii afaraad xilka madaxweynaha.
Aggrey Mwelese waa 43 jir waa aabbo ka shaqeeya ammaanka, wuxuu Al-Jazeera u sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu ka qeybgalo doorashada maanta, isagoo sheegay in codkiisa uu ka dhiibtay xaafadda uu deggan yahay.
Ballanqaadyda labada nin
Kenyatta ayaa ballan qaaday in uu abuuri doono in ka badan hal milyan oo shaqooyin cusub oo waddanka, waana waddanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan gobalka.
Odinga, ayaa isna sheegay in uu la dagaallami doono musuqmaasuqa, iyadoo hey'adda Transparency International ay sheegtay in la dagaallanka musuqmaasuqa ay hoos uga dhacday.
Odinga ayaa sidoo kale ballan qaaday in uu abuuri doono shaqooyinka dhallinyarada isla markaana dalka uu hormar gaarsiin doono gaar ahaan dhinaca cuntada maadama dalka ay ku soo noqnoqdeen abaaro.
Doorashadan ayaa indhaha lagu hayaa, waxaana dalkaas ku sugan korjoogayaal caalami ah oo la socon doona doorashada iyadoo laga warqabo doorashadii 2007-da kaddib markii mucaaradka ay diideyn natiijada doorashada oo ay isku qabteyn Mwai Kibaki.
In ka badan 1,000 qof ayaa ku dhintay qalaalasihii ka dhashay doorashadaas waxaana ku barakacay ku dhawaad 600,000 oo qof.
posted on Tuesday, August 8th, 17